चीनमै दुई यात्रु झारेर किन मध्यरात उड्यो विमान? – HKNepal.com – First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
चीनमै दुई यात्रु झारेर किन मध्यरात उड्यो विमान?
२२ माघ २०७६, बुधबार ०७:५९
आइतबार राति बेइजिङबाट हिमालय एयरलाइन्सको विमानले थुप्रै नेपालीलाई काठमाडौँ ल्यायो।
सो विमानबाट आएका एक जना यात्रीले सबै कहानी सुनाएः
बेइजिङबाट अपरान्ह ५ बजेर ४० मिनेटमा उड्नुपर्ने जहाज राति १० बजे मात्र टेकअफ भयो । यसअघि शुक्रबार काठमाडौँ आउन लागेका चार जनालाई बेइजिङको तासिङ विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो । निकै कडाइका साथ स्वास्थ्य जाँच गर्ने डिजिटल एएक्सरे मेसिनले नेपालीको तापक्रम ३७.४ डिग्री सेल्सियस देखाएको रहेछ । त्यही भएर आइतबार आउने हामी पनि उड्न पाउने अथवा नपाउने भन्ने द्विविधा मै थियौँ । सौभाग्यवश सबै यात्रुले उड्न पायौँ।
आइतबार कुनै पनि यात्रीले तासिङ विमानस्थलबाट फर्कनु परेन । तर, विमानमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु रहेछौँ । धेरै नेपाली, त्यसपछि बंगाली र केही चिनियाँ गरेर क्षमताभन्दा बढी यात्री भएकाले इन्धान झिक्नुपर्ने कारण उडानमा अबेर भयो । इन्धन झिकिसकेपछि दुईजना चिनियाँले आफूहरुलाई पसिना आयो, यात्रा गर्दैनौँ भने । शरीरमा ज्वरो आयो भनेपछि उनीहरुलाई ओराल्न थप समय लाग्यो । सुरक्षा र स्वास्थ्यको निकै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने रहेछ । अनि बल्ल विमान उड्यो राति १० बजे नाघेपछि।
इन्धन थोरै भएकाले काठमाडौँसम्म आउन पर्याप्त थिएन । त्यही भएर ढाकामा केहीबेर रोकी इन्धन भरेर आउँदा बिहान साढे तीन जति भएको थियो । बेइजिङमा दुईजना चिनियाँलाई संक्रमणको आशंकाका कारण झारेपछि हामी सबै यात्री त्राहिमाम भएका थियौँ । हामीमा त्यस्तो संकेत थिएन तर सबैमा मनोवैज्ञानिक त्रासचाहिँ थियो। जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ।
Tags: यात्रु, हिमालय एयरलाइन्स
राजेशपायलको भ्यालेनटाईन गीत ‘हुरुक्कैं भएँ म’ मा दयाहाङ र एलिसाको प्रेम